AMISOM oo walaac ka muujisay war kasoo baxay Mareykanka
MUQDISHO, Soomaaliya - Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya [AMISOM] ayaa walaac ka muujiyay go'aanka Mareykanka ee ah inuu dhimayo Ciidamada ka jooga dalka, xilli Al-Shabaab ay kordhisay weerarada.
Taliyaha Ciidanka Uganda ee Soomaaliya, ahna taliyaha joogtada ah ee AMISOM, Paul Lokech, ayaa ka digay in Mareykanka uu Ciidamadiisa la baxo, isagoo xusay in dhabar-jab ku noqon doonto howlgalka hadii hal dhinac uu faarujiyo kaalintiisa.
Taliyaha ayaa tilmaamay in dhamaan dalalka hadda qeybta ka ah howlgalka ay yihiin kuwa door fir-fircoon ku leh dadaalabada nabadda soo celinta xasiloonida Soomaaliya, islamarkaana hadii mid kamid ah uu baxo aanan la helayn cid buuxisa.
"[Dal] walba oo howlgalka qeyb ka ah, wuxuu leeyahay door muhiim ah. Hadii [Dal] uu faarujiyo booskiisa, lama helayo cid buuxisa booskaas," ayuu Paul Lokech, usheegay Wargeys kasoo baxa Mareykanka.
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya [AMISOM] oo dalka yimid sanadkii 2007-dii, ayaa wajahaya dhaleeceyn xoog leh, oo ku saabsan inaysan gaarin yoolkii iyo hadafkii dalka loo keenay ee ahaa in Al-Shabaab dalka laga xureeyo.
Tirada Ciidamada AMISOM oo lagu sheegay 22,000 oo Askari ayaa waxaa la qorsheynayaa inay dalka ka baxaan 2020-ka, iyagoo mas'uuliyadda amaanka goobaha ay hadda gacanta ku hayaan ku wareejinaya Ciidamada Soomaaliya.
Deeq-bixiyaha ugu badan ee lacagta siiya AMISOM waa Midowga Yurub, oo hadda wada dib u eegis uu ku sameynayo taageerada uu siiyo howlgalka lamana saadaalin doono go'aanka ay qaadan doonan.
Jubaland oo ka warbixisay duqayn Mareykanka la eegtay Al-Shabaab
Soomaliya 09.02.2019. 09:49
War kasoo baxay AFRICOM ayaa lagu sheegay in howlgalka uu ahaa mid yimid kadib markii...
Howlgal Al-Shabaab xubno badan looga dilay oo ka dhacay Shabeellaah Hoose
Soomaliya 25.09.2018. 11:08
Uganda oo shaacisay tirada Askarta looga dilay weerarkii Buula-Mareer
Soomaliya 01.04.2018. 19:52
Weerar cirka iyo dhulka ah AlShabaab "looga burburiyay" Saldhigyo
Soomaliya 03.09.2018. 10:19
Qaraxyo ka dhacay duleedka Afgooye [Fahfaahin]
Soomaliya 23.06.2018. 10:48
Weerar ka dhacay duleedka Muqdisho [Fah-faahin]
Soomaliya 11.06.2018. 13:30
Al-Shabaab oo dagaal kula wareegtay Daynuuney [Fah-faahin]
Soomaliya 07.06.2018. 11:53
Weerar lagu qaaday Baar-sanguuni iyo wararkii ugu dambeeyay [Sawirro]
Soomaliya 19.01.2019. 10:51